သီတင်းကျွတ် ပိတ်ရက် အဝေးပြေး ကားခဈေးတက် - Yangon Media Group
သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ကာလများအတွင်း ရန်ကုန်မှနယ်မြို့များသို့ သွားသည့်အဝေးပြေးယာဉ်စီးခနှုန်းထားများမြင့်တက်နေကြောင်းသိရသည်။ ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဝင်းမှ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သို့သွားသည့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းအချို့၏ ယာဉ်စီးခနှုန်းထားများမှာ ယခင် အမြင့်ဆုံးကျပ် ၃၅ဝဝ ခန့်သာရှိ ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ကျပ်တစ်သောင်းဝန်းကျင်အထိ ပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျုံတနီးသို့သွားမည့်ခရီးသည်တစ်ဦးက”ဟိုအရင်တုန်းကကျပ် ၂၅ဝဝ ပဲရှိတယ်။ ခုကပိတ်ရက်မို့လို့လူ တွေများလို့လားမသိပါဘူး။ ကျပ် ၉ဝဝဝ တောင်ပေးလိုက်ရတယ်။ပြန်ချင်တော့လည်းပေးရတာပေါ့။ ပိတ်ရက်ရှည်ပြီဆိုကားခတွေဈေး တက်တာဖြစ်နေကြပဲ”ဟု ပြောသည်။ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ရှည် သည့်အတွက် နယ်ပြန်ရန်ကား လက်မှတ်ဝယ်သူများမှာ အလွန် များပြားနေပြီး အချို့ကားဂိတ်များ မှာလက်မှတ်ခနှုန်ထားကို ပိုတောင်း ကြသော်လည်းအချို့မှာပုံမှန်နှုန်း ထားအတိုင်းသာ ရောင်းချနေကြ ကြောင်း ဒဂုံဧရာနှင့်အောင်မင်္ဂ လာအဝေးပြေးဝင်းတို့ရှိ ကားဂိတ် အချို့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အောင် မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းရှိ ရန်ကုန်-ပုသိမ်အဝေးပြေးဂိတ်တစ်ခုမှ တာ ဝန်ခံတစ်ဦးက ”ဆီဈေးကြောင့် လည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဂိတ် ကတော့မတက်ဘူး။ အချို့ကား လက်မှတ်ခတွေတက်ရောင်းနေ ကြတယ်ကြားတယ်။ ဘယ်လောက် တက်လဲဆိုတော့ အချို့ကများများ၊ အချို့က မနည်းမများ၊ အချို့က တော့ ပုံမှန်ရောင်းနေကြတယ်လို့ သိရတယ်”ဟု ပြောသည်။ ရန်ကုန်မှ နယ်မြို့ဒေသများ သို့ပြန် ခရီးသွားများအတွက် ယာဉ်စီးခနှုန်းထားမြင့်မားသည့် အပြင် ကားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန် မှာလည်းအခက်အခဲရှိနေကြောင်း ခရီးသွားအချို့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အောင် မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းမှ တောင်တန်းပြာရန်ကုန်-တောင် ကြီး-လားရှိုး -မူဆယ်ကားဂိတ်မှ တာဝန်ခံတစ်ဦးက”ပြန်ဖို့အတွက် လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ခရီးသည်တွေ များတယ်။ လက်မှတ်ခတွေက အ ချို့ဂိတ်တွေတိုးယူတယ်လို့ကြား တာပဲ။ ကျွန်မတို့တော့ပုံမှန်ဈေးပဲ။ ဘယ်ဂိတ်က ဘယ်လောက်ဆို တာတော့မသိဘူး။ တိုးယူတဲ့ဈေးနှုန်းကတစ်ဂိတ်နဲ့တစ်ဂိတ်တော့ မတူကြဘူးလို့တော့ ကြားတာပဲ”ဟုပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသယ် ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့က အဝေးပြေး ယာဉ်စီးခလက်မှတ်နှုန်းထားများကိုတိုးမြှင့်မကောက်ခံရန် ညွှန် ကြားထားသော်လည်း ယာဉ်စီးခနှုန်းထားတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုများရှိ နေသည့်အပြင် လိုင်းမဝင်ထား သော ကားများလည်းဝင်ရောက် ပြေးဆွဲနေကြောင်း သိရသည်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ လူအုပ်ကြီးထဲမှ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးမ
သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ မိုးခေါင်ရေ ရှားဒေသတွင် ပြင်းထန်သော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းဒဏ် ခံစားနေရ
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်တံတား ပိတ်ထားဆဲ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်သည့် လူများနှင့် လှည?
ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ဖမ်းဆီးမှုမရှိစေရေး ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီများဖွဲ့၍ ဆောင?
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှ လုပ်ရပ်အတွက် ပယ်ဇန် နောက်ခံလူကို ရာမို့စ် ပြန်တောင်းပန်